"ဒစ်ဂျစ်တယ် စာကြည့်တိုက်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဒစ်ဂျစ်တယ် စာကြည့်တိုက်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ဒစ်ဂျစ်တယ် စာကြည့်တိုက် (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၅:၁၅၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မူ
၂၆၁ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်
Created by translating the page "Digital library"
၀၅:၁၃၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
Khinelay (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
(Created by translating the page "Digital library")
၀၅:၁၅၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
ကွန်ပျူတာများနှင့် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ကို တီထွင်လိုသည်။ သို့မှသာ လူတို့လိုအပ်ချက်နှင့် အကြံပေးချက်များကို စက်မှ အလိုအလျေျာက်အကြံညဏ်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်တွင် ၃ ပိုင်းပါဝင်သည်။ အသိညဏ်အစိတ်အပိုင်း၊ မေးခွန်း၊ အဖြေတို့ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်သိမြင်တတ်သည့်စနစ် ဟုခေါ်ခဲ့သည်။.
အီလက်ထရောနစ်ကဒ်ဖြင့် ကတ်တလောက် လုပ်ဆောင်ခြင်း OPAC (Online Public Access Catalog) ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ By the 1980s, the success of these endeavors resulted in OPAC replacing the traditional card catalog in many academic, public and special libraries. This permitted libraries to undertake additional rewarding co-operative efforts to support resource sharing and expand access to library materials beyond an individual library.
၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းတွင် OPAC အောင်မြင်မှုရလာပြီး အများပြည်သူသုံးစာကြည့်တိုက်နှင့် အထူးစာကြည့်တိုက်များတွင် သမားရိုးကျ ကဒ်စနစ်အစား OPAC ကိုသုံးလာကြသည်။ This permitted libraries to undertake additional rewarding co-operative efforts to support resource sharing and expand access to library materials beyond an individual library.
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/409938" မှ ရယူရန်